» सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्ने अभियानमा सरकारी र विदेशी लगानीको उद्योगबाटै धोका !
सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्ने अभियानमा सरकारी र विदेशी लगानीको उद्योगबाटै धोका !
२०७८ जेष्ठ ८, शनिबार १७:२५
काठमाडौं । नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका सिमेन्ट उद्योगहरू जडित क्षमताअनुसार उत्पादन गर्ने गरेका छैनन् । नेपालको सरकारी, वैदेशिक लगानीमा खुलेका वा निजी क्षेत्रको पू्र्ण लगानीमा खुलेका सिमेन्ट उद्योगले दुईतिहाइ पनि जडित क्षमता उपयोग गरेका छैनन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययन अनुसार विदेशी लगानीमा खुलेका सिमेन्ट उद्योग अवस्था झनै नाजुक छ । उनीहरूले आधा क्षमता पनि उपयोग गरेको देखिँदैन ।
नेपालमा स्थापित ५५ सिमेन्ट उद्योगको जडित क्षमता वार्षिक १ करोड ५० लाख टन उत्पादन हो । तर, यी उद्योगबाट ७४ लाख ५० हजार टनमात्र उत्पादन हुने गरेको छ । नेपालको माग धान्न थप १५ लाख ६० हजार टन आयात गर्नुपरेको छ ।
आत्मनिर्भर बनेर पनि सिमेन्ट आयात गर्नुपरेका पीडाको कारण हो, उद्योगहरू आंशिक क्षमतामा मात्र चल्नु । त्यसमाथि पनि करोडौं रूपैयाँ विदेशी लगानीमा खुलेका उद्योग त आधा क्षमतामा पनि चलेका छैनन् । ती उद्योग बढी प्रभावकारी, कम लागतमा चल्ने तथा बढी नाफा गर्न सक्ने क्षमताका भएपनि ४५ प्रतिशतमात्र क्षमता उपयोग गरिरहेका छन् ।
सरकारी सिमेन्ट उद्योग भने आधा जडित क्षमतामा चलिरहेका छन् । केन्द्रिय बैंकको अध्ययनअनुसार २ सरकारी उद्योगको उत्पादन जडित क्षमताको ५०.१२ प्रतिशत छ ।
यता स्थानी निजी सिमेन्ट उद्योग भने बढी अब्बल देखिएका छन् । महंगो लागत, ठीकै प्रविधिका बाबजुत यस्ता ५० उद्योगले आफ्नो क्षमताको करिब दुई तिहाइ सिमेन्ट उत्पादन गर्ने गरेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय व्यवसायीको पूर्ण स्वामित्वमा चलेका उद्योगले वार्षिक क्षमताको ६३.७८ प्रतिशत उत्पादन गर्ने गरेका छन् ।
देशका ५५ सिमेन्ट उद्योगमध्ये ३ उद्योगमा विदेशी लगानी छ भने २ वटा सरकारी हुन् । विदेशी लगानी भएको उद्योगको क्षमता नेपालको कुल क्षमताको २०.३१ प्रतिशत (३० लाख ४८ हजार टन) हो । २ सरकारी उद्योगले वार्षिक ६ लाख मेट्रिक टन उत्पादन गर्छन् ।
यी ५ सिमेन्टसँग वार्षिक ३६ लाख ४७ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र र सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार नेपालको वार्षिक सिमेन्ट उत्पादन क्षमता १ करोड ५० लाख टन हो ।
वैदेशिक लगानीमा खुलेका उद्योगले १३ लाख ७१ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्छन् भने २ सरकारी उद्योग ३ लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्छन् ।
यी दुई प्रकारमा उद्योगबाट वार्षिक क्षमताबराबर उत्पादन हुँदा आयात अन्त्य हुने देखिन्छ । यी ५ उद्योगले वार्षिक क्षमताभन्दा १९ लाख ७५ हजार टन कम सिमेन्ट उत्पादन गर्छन् जुन वार्षिक आयात १५ लाख ६० हजारभन्दा बढी हो ।
वैदेशिक लगानीबाट खुलेका सिमेन्ट उद्योग कम खर्चमा तथा गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्षम पनि छन् । केन्द्रिय बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विदेशी लगानीमा खुलेका उद्योगले १ टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न ०.९९ टन चुनढुंगा खपत गर्छन् जबकि, सरकार लगानीमा खुलेका उद्योगले १.४५ टन चुनढुंगा प्रयोग गर्छन् ।
तर, नेपाली आयोजना परियोजनाले भने नेपाली सिमेन्ट गुणस्तरीय नहुने भन्दै विदेशबाट सिमेन्ट आयात गर्ने गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा सिमेन्ट उद्योगमा वैदेशिक लगानी : आर्थिक सामाजिक प्रभावको अध्ययन प्रतिवेदन’ अनुसार आन्तरिकरूपमा उद्योगबाट ७४ लाख ९० हजार मेट्रिक टन मात्रै सिमेन्ट उत्पादन भएको छ । यस्तै १५ लाख ६० हजार मेट्रिक टन विदेशी मुलुकबाट आयात भएको देखिन्छ ।
लगानी र उत्पादन क्षमताका आधारमा हेर्दा मुलुकमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेका सिमेन्ट उद्योगको वाहुल्य रहेको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनमा समावेश छ ।
अध्ययनमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेका सिमेन्ट उद्योगको वस्तुस्थितिको तुलनात्मक स्थिति, स्वदेशी माग र आपूर्तिलगायत ती उद्योगको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव संलग्न गरिएको छ । अध्ययनले विदेशी लगानी रहेका तीन सरकारी स्वामित्व र निजी स्वामित्व रहेका दुई/दुई गरी कूल ७ उद्योगलाई समेटेको छ । सिमेन्ट उद्योगको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावको विश्लेषणात्मक अध्ययनका लागि प्रत्येक उद्योगबाट कार्यकारी प्रमुख, दुई कर्मचारी र उद्योग वरपरका १० जना बासिन्दालाई उत्तरदाताका रूपमा चयन गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।